Njalo ngezikhathi ezithile ngenkathi upheqa Youtube, uthola igugu. Le vidiyo evela kuListrak yashicilelwa ngoFebhuwari lapho bethula isisombululo sabo sokulahla inqola yokuthenga, kepha bengifuna ukuyishicilela lapha ngezizathu ezimbalwa. Okokuqala, ukubuka konke okuhle ngokuthi yini ukulahlwa kwenqola yokuthenga… okulandelayo, yividiyo enhle futhi ngiyethemba ukuthi uListrak ukhiqiza ezinye zazo.
Isixazululo sokumaketha kabusha senqola yokuthenga sikaListrak siphinda sithathe izinqola zokuthenga ezilahliwe futhi sinikeze namathuba okubandakanya abathengi kabusha ngokunikezwa okwenzelwe wena nemiyalezo efanele. Kusetshenziswa isoftware yabo, umkhankaso wokuzibandakanya kabusha ungaba yi-imeyili eyodwa noma ungahlakulela ukusakazwa kwama-imeyili ukukhulisa ukuguqulwa.
Ukulahlwa kwenqola yokuthenga akuyona nje into ene-eCommerce. Noma iyiphi indawo yenkampani esetshenziselwa imizamo yokumaketha engenayo imvamisa inobuthakathaka lapho izivakashi zilahleka khona lapho kuguqulwa. Ngezinye izikhathi, kungenxa yokuthi ukwakheka okungalungile akukuhlinzeki nganoma yisiphi isisusa sokuzibandakanya ngokuqhubekayo. Ezinye izinkinga zingaba ifomu elibanzi, izikhathi ezilayishwa zokulayisha ikhasi, noma ezinye izingqinamba.